फेरि फुट्यो एमाले, नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन, को बन्यो नयाँ अधक्ष्य ? — Sanchar Kendra
फेरि फुट्यो एमाले, नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन, को बन्यो नयाँ अधक्ष्य ?
काठमाडौँ । नेकपा एमाले फेरी फुटेको छ । प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको हैसियत पाएका हृदयेश त्रिपाठीले नयाँ पार्टी बनाउने भएपछि एमाले फुटेको हो ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट अलग भएर स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाएका त्रिपाठीले नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यबाट २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जितेका थिए ।
हृदयश त्रिपाठीले आफ्नो अध्यक्षतामा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । ३० सदस्यीय कार्यसमितिसहित त्रिपाठीले शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको सो पार्टीका महासचिव ईश्वरदयाल मिश्रले बताए ।
पार्टी दर्ताका पार्टीको विधान, घोषणापत्र लगायत कार्यसमिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित आवश्यक अन्य डकुमेन्टहरू राखेर निवेदन दर्ता गराएको उनले बताए । उनले भने, ‘३० जनामध्ये १५ जनाले सनाखत गरेका छन् । बाँकी १५ जनाले आइतबार सनाखत गर्नेछन् ।’
अध्यक्ष त्रिपाठीले चुनाव चिन्ह दिएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले तीनवटा चुनाव चिन्हमध्ये एउटा चयन गर्न भनेको थियो तर अध्यक्ष त्रिपाठीले आफूले चुनाव चिन्ह पछि दिने बताएका छन् ।
पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा.शिवजी यादव छन् । यस्तै अन्य तीनजना उपाध्यक्षमा हर्ककलाल सिंहराजवंशी, मोहम्मद साविर हुसैन र फरहान अकवाल खाँ रहेका छन् ।
महासचिवमा इश्वर दायाल मिश्र र डा.भरतकुमार थापा रहेका छन् भने सदस्यहरुमा बाबा सरकार श्रेष्ठ, हेमशंकर सिंह ‘राजपुत’, श्याम थापा, देवेन्द्र किशोर ढुगांना, उमा तिवारी, रामचन्द्र सुतियार शर्मा, श्रीमननारायण मिश्र, शोभा त्रिपाठी, गीता भुसाल, श्यम कृषि अधिकारीलगायतका छन् ।